The Book – The Umshumayeli Return of the King | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Bathandekayo abafundi impahla blog yami.
Ngiyajabula ukumemezela ukushicilelwa encwadini yami ogama isihloko kuyafana blog « Umshumayeli Return of the King »
Ungakwazi kakade oda yona kumhleli « Edilivre » ngaphambi ezitolo ezidayisa
Isihloko Paper: « The Umshumayeli Return of the King »
Ucingo: 01 41 62 14 40 / Fax: 01 41 62 14 50
Imininingwane Internet: http://www.edilivre.com/contacts
Christianity emphakathini wethu dengwane, ishiywe futhi okuhlatshelwe izithakazelo nobuntu ogama lakhe sithola ukuthi singabantwana kancane kancane « kusulwe » nokuthi amasonto ethu acekela. Sithola ukwanda okufanayo ongavamile Islam emhlabeni wonke.
Uma ufunda blog posts yami, niyazi ukuthi lena izimpawu kuzalwa okunamandla okuseduze ukubuya kweNkosi yethu neNkosi uJesu Kristu.
Ngakho abaningi basindiswe, sonke kumelwe senze konke esingakwenza ukuze senze umhlaba wazi futhi uqonde ukuthi uJesu Kristu uyiNkosi yalo emhlabeni futhi nguye maduze ukwahlulela abantu nezizwe.
Yingakho I wadala le blog futhi ngiyabonga ngokufudumele ukuba uvakashele futhi ukufunda izihloko yami.
The blog manje wavakashela izikhathi mayelana 500 usuku ngalunye.Lokhu kungase kubhekwe kuphumelele ngempela.
Kodwa, lokho akwanele ukutshela umhlaba ukubuya kweNkosi uJesu Kristu kanye ngakho nganquma ukubhala incwadi ukuze abaningi asifinyeleli internet uyaziswa nokuthi wonke umuntu angazinqumela umphefumulo wakhe nonembeza indlela afuna ukulandela.
Emphakathini wethu emnyama, ukholo lwethu neshaya abaningi banomuzwa wokuthi uNkulunkulu umlahlile, kodwa mina ngithi kini akusiyo.
UNkulunkulu akakaze asilahla, uyasithanda ngokwanele ukuba baye bavumela indodana yakhe ngubani Love okuhlanzekile, weza emhlabeni futhi lapho ohlukunyezwayo, bathukwa, ebhaxabulwa futhi ekugcineni ngokuhlupheka enyantisayo ibethelwe abethelwe pass esiphambanweni by ukufa ukusindisa kithi.
Kodwa ngeshwa thina zigcwele izimfundiso zamanga, abaprofethi bamanga futhi onkulunkulu bamanga ukuthi ukuphazamisa umbono wethu kaNkulunkulu futhi babe nathi sithathe eduke emizileni.
Ngakho ngangifuna ukuletha encwadini yami ukuba abafundi bonakaliso ezingenakubalwa khona kukaNkulunkulu nendodana yakhe ezelwe uJesu Kristu. Lokhu kwenzelwa ukuthi wonke kukhona « amakholwa kodwa sachants » more.
Incwadi yami libonisa ukuthi unguNkulunkulu owadala indawo yonke nakho konke okukuwo. Iphinde efakazela ukuthi uJesu ungowaphezulu Kristu kanye bakhe ukuba Earth ukubuya okuseduze.
Nakuba incwadi yomlando noma isayensi, yena uchaza ohambweni lomuntu kusukela yaqala ukuba ukubuya ukuze ensimini yase-Edene, phakathi nokubusa kukaJesu Kristu kanye zizobona ikusasa the umuntu ngemva kokubusa kukaJesu Kristu.
Iphinde ucacisa iziprofetho izikhathi kuphele kanye ivumela ukwazi esiphezulu kokulindela kwethu ukubuya kweNkosi yethu uJesu Kristu.
Kubalulekile futhi ngisho abalulekile ukuthatha ikhefu ekuphileni ukuthatha stock lokho kubalulekile futhi kubalulekile ekuphileni. Yilokhu I bakumema ukuba wenze lokhu ngokufunda incwadi yami.
UJesu Kristu uyeza emuva ngokushesha ukwahlulela abantu nezizwe, kuba iqiniso kodwa izinsuku ngaphambilini ezinzima kakhulu namanje ukushaya Earth futhi esintwini. Ukufunda le ncwadi esingazilungisa ukuba abhekane kulezi zikhathi ezinzima ukuthi sisenalo ukuwela.
Belungisa ezicijile ikuvumela ukuba ukuqinisekisa ukuthi zonke izinkinga zethu ziyakhula njalo iminyaka eminingana. Kodwa thina kukhona incazelo futhi encwadini.
I bakumema nje kuphela ukufunda encwadini yami kodwa futhi ukuze enze kwaziwe ukuze more uyifunde futhi uqaphele ukuthi iqiniso alikho ngokoqobo kwansuku samchazela emphakathini wethu elingakholelwa kuNkulunkulu.
Ake sonke, amasosha kaJesu Kristu, kungumsebenzi wethu yobuKristu futhi basebenza ngobuqotho nokusakaza izwi elihle « UJesu Kristu uyeza emuva ngokushesha »
Zonke bangagcinwa uma sebefike uKristu ngokubhapathizwa nokuphenduka.
Kufanele kusenze sibhekane namaqiniso futhi uqaphele ukuthi siphila emhlabeni iminyaka eminingana isikhathi kanzima njengabantu ngabanye.
Lezi ezazifundiswe nsuku zonke nezinhlekelele zendalo ezifana outsized Izimvula ezinamandla, izikhukhula, iziphepho, izinhlekelele, ukuzamazama komhlaba, iziphepho, izivunguvungu, imililo, ukuqhuma kwezintaba-mlilo.
Kodwa naso njalo ngonyaka iminyaka eminingana ngaphandle ukufa kwabantu owaziwa per million ngoba izinhlanzi, izinyoni, imfuyo kanye nezilwane zasendle kulo lonke elase-planet.
Ziyakwazi futhi izimpi imisindo umsindo ovala izindlebe wokudubula impi yezwe, udlame, ukulahlekelwa amagugu nokuziphatha.
Futhi liphinde radicalism anda futhi Abashisekeli Islamic ogama abashisekeli zibulawa amalungu abantu yobuKristu futhi yenza desecration, ukucekelwa phansi, bayahlukunyezwa futhi ukubhujiswa amasonto.
Ingasaphathwa ukwehla okukhulu eSontweni LamaKatolika wabapristi.
Ukuze bonke lobu bubi kumelwe wengeze ekubhujisweni global ukuthi uye kuxazululwe phezu kwezwe kusukela ngozi stock market of September 29, 2008, okubangela indlala nosizi yonke indawo, umthelela yonke ebaluleke kakhudlwana njengoba labantu emhlabeni lenyuke ezimbili kanye nabakhileyo ngo-1950 laya kwabangaphezu kuka-billion eziyisikhombisa 2012 angaba yizigidi eziyizinkulungwane nengxenye, iminyaka engu-63 kuphela.
Ngisho Vatican owayeyizibulo Bheka oNgcwele ka iSonto LamaKatolika liye laba yindawo esinuka lapho uJesu Kristu uye waba isesekeli elula noma ucezu Museum Vatican.
Konke lokhu kuchazwe encwadini.
Bonke abaziyo mina ukwazi ukuthi mina ungalokothi uphonse ithawula ngoba akukho entabeni zingangentaba futhi ngingathanda ayaqhubeka ukumemezela izindaba eziningi ezinhle Return okuseduze iNkosi uJesu Kristu.
Kulabo abafisa ukwazi ukuthi ngingubani:
Lapha kafushane ingxenye encane biography yami.
Son of a ngogesi isiPutukezi bathuthela France ngo-1957, ngakhulela kwezemfundo Catholic, Ikhathekizimu, yenhlanganyelo joc (Young Christian Workers).
Lokhu mfundiso ungenze indoda standard yobuKristu.
Ngangizama kanye ngakwazi ukuphila okunempilo othandweni lukaNkulunkulu nokuhlonipha imithetho yayo (ngaphandle kokuba a saint!)
Mangisho ukuthi kusukela ebuntwaneni bami njalo uNkulunkulu ubelokhu ingxenye yokuphila kwami. Nguye umuntu omethembayo, umngane, umeluleki futhi i aid esisemqoka ekuphileni kwansuku zonke.
Ngesikhathi ingxenye eside kakhulu yokuphila kwami ​​ngiye ngaba umsebenzi kunzima kakhulu futhi kuyinkimbinkimbi futhi uNkulunkulu wenza izimangaliso eziningi ukungigcina ngiphila kuleli career eliyingozi.
Ngakho anginazo izimfihlo evela kuNkulunkulu futhi nginethemba inani ngokuphelele kuye.
Unkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe kimi njalo futhi unginika usizo lwakhe ekuphileni kwansuku zonke. Ngiqinisile ngithi kini ukuthi kuba injabulo elihlanzekile ukuzizwa ngithandwa futhi sisizwa uNkulunkulu.
Ngakho ngifuna ukuba khona futhi uNkulunkulu uthobekile ngesilinganiso esincane ufakaza lutsandvo lwakhe kitsi kanye uzosheshe abuye Emhlabeni sendodana yakhe uJesu Kristu.
Ngo-2009 by the chance merest Ngaqaphela ukuthi siphila ngasekupheleni izikhathi kweBhayibheli ukuthi eyophela ukubuya kukaJesu Kristu.
Yebo umKristu omuhle engangikufundile kahle usuku ikhathekhizimu kufike ukuphela kwezwe futhi ngalolo suku uNkulunkulu uzobuya Emhlabeni ukwahlulela sonke isintu.
Ngaphambi ngokuhlakanipha ukwamukela ukubuya kukaJesu Kristu kwaba kuhlelwe kahle isizukulwane sethu, mina baye bacubungula kakhulu kodwa zonke izibonakaliso lesiprofetho ememezela izikhathi kuphele kanye nokubuya kukaJesu Kristu Emhlabeni.
I ekugcineni kwadingeka ukuya ubufakazi futhi uthole ukuthi zonke izimpawu kanye iziprofetho izikhathi kuphele umemezele ukubuya kukaJesu Kristu ezifeziwe nsuku zonke futhi lokhu kungase nganoma iyiphi indlela kube ukuqondana njengoba iziprofetho eziningana ezashiwo lenza kwakubaluleke.
Ihluka Lokhu kuye kwashintsha ukuphila kwami ​​futhi kanjalo nganquma ukwakha kule blog « Umshumayeli Return of the King » okusho I banyathelisa izihloko eziningi ngazo zonke izilimi ukwazisa sonke lesi senzakalo esimangalisayo futhi neqhaza futhi Awakening of the world yobuKristu ukuze wonke umuntu esingazilungisa ingqondo yakhe futhi umphefumulo wakhe kuze kubuye uJesu Kristu iNkosi yethu neNkosi, indodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu.
Incwadi yami ihlose ukukhombisa umfundi khona kukaNkulunkulu, uJesu ungowaphezulu Kristu, ukuba achaze kwemvelo bomuntu noNkulunkulu futhi ukwazisa inani elikhulu le ukubuya emangalisayo Glory yethu INkosi uJesu Kristu ngokuba kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka eyinkulungwane.
Kukhona iqiniso kuleli zwe ezibhubhisayo ukuthi uJesu Kristu libuyela ngokushesha.
Kubalulekile futhi kubalulekile ukukhumbula ukuthi uJesu Kristu wathi:« Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila, akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. «
Uma lokhu kungenjalo kwenziwa, ingabe ukubhapathiza futhi abaningi ukuba uKristu ukuza basindiswe.
Ngokushesha kuyoba sekwephuzile futhi kuyoba khona kuwo wonke emhlabeni umemeza kanye izinyembezi zonke latecomers.
Ngiyanicela ujabulise ukwethula encwadini yami ukuba bonke abazali bakho, abangane, ubudlelwano, oxhumana nabo bonke zokuxhumana nabantu ukuze wonke ukuba ibuye ukwazi futhi ahlanganyele vula uthando lukaNkulunkulu futhi basindiswe.
UNkulunkulu uyasithanda futhi abathanda iNdodana yakhe ezelwe uJesu Kristu ngokushesha ukubuyela Earth ukubuya kuze ensimini yase-Edene ukuba bonke labo kuye.
Background Heart ngiyabonga konke okwenzayo ngothando inkazimulo kaNkulunkulu noJesu Kristu wena!
UNkulunkulu akubusise futhi likuvumela ukusebenza ngothando inkazimulo kaJesu Kristu.